Home Wararka Cabdi Xaashi oo markale loo doortay guddoomiyaha Aqalka Sare ee baarlamanka
Cabdi Xaashi oo markale loo doortay guddoomiyaha Aqalka Sare ee baarlamanka
Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, gaar ahaan Teendhada Afisyooni waxaa maanta lagu qabtay doorashada guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, taas oo ay ku tartameen illaa saddex musharrax.
Musharixiinta loolamay ayaa kala ah 1-Cabdi Xaashi Cabdillaahi, 2-Saalax Axmed Jaamac 3-Cismaan Abuukar Dubbe oo dhammaantood kasoo jeeda Gobollada Waqooyi.
Doorashada oo aheyd mid xasaasi ah ayaa waxaa codadkooda dhiibtay illaa 54 Senator ee uu ka kooban yahay Golaha Aqalka Sare, waxaana guusha ay raacday Cabdi Xaashi.
Sida uu shaaciyey guddoomiyaha KMG ah ee Golaha Aqalka Sare waxa uu Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi helay 28cod, musharrax Saalax Axmed Jaamac ayaa isna helay 24cod, halka wasiirka Warfaafinta Cismaan Abuukar Dubbe uu helay codAD gaaraya 2cod.
Cabdi Xaashi ayaa markale 4 sano ee soo socota hoggaaminayo Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya, isaga oo 5 sano ee lasoo dhaafay ahaa guddoomiyaha Golahan.
Ninkan oo ka mid ah rugcadayaasha siyaasadeed ee kasoo jeeda Gobolada Waqooyi ayaa lagu xasuustaa dagaalkii siyaasadeed ee uu horey ula galay Villa Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Guusha Cabdi Xaashi ayaa dhabar jab ku ah kooxda Villa Soomaaliya, waxaana dhinac kale ee guul siyaasadeed u tahay kooxda Rooble iyo Mucaaradka oo soo dhoweeyey guushiisa.
Sidoo kale doorashada ayaa haatan sii soconeysa, waxaana la guda-galayaa doorashada guddoomiye ku xigeenka 1-aad oo ay taagan yihiin labada musharrax iyo guddoomiye ku xigeenka 2-aad oo ay isku soo taageen illaa 7 Senator oo ka tirsan Golaha Aqalka Sare.
Previous articleGen. Xijaar oo xoog ku qabsaday Villa Hargeysa kana saaray Guddiga Doorashada
Next articleDoorashada Guddoonka Aqalka Sare oo soo dhamaatay – Yaa kusoo baxay?
Taariikh nololeedka Madaxweynaha cusub ee Mareykanka “Joe Biden”
warar dheeraad ah oo kasoo baxaya dagaal dhexmaray ciidamada dowladda iyo...